जापानको बारेमा अविश्वसनीय तथ्यहरू जसले तपाईंलाई विमानको टिकट किन्न बाध्य पार्छ - NepalDainik
जापानको बारेमा अविश्वसनीय तथ्यहरू जसले तपाईंलाई विमानको टिकट किन्न बाध्य पार्छ
सन् १८५३ मा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि खुला भएदेखि जापानले यात्रुहरूलाई मोहित गर्दै आएको छ। यसका धेरै परम्परा र सांस्कृतिक स्थलचिन्हहरू कायम रहँदा, जापान विश्वको प्रमुख आर्थिक र प्राविधिक केन्द्रहरूमध्ये एक हो। प्राचीन देवताहरू र परम्परागत चलनहरू अत्याधुनिक प्रविधिहरू र ट्रेंडी पप संस्कृतिको साथमा छन्, र त्यहाँ भ्रमणमा अनुभव गर्न सधैं केहि नयाँ छ। हाराजुकुको फेसनदेखि उत्तम उत्पादनहरू, खाली आर्केस्ट्रा र विचित्र खाना-समयको शिष्टाचारसम्म, यहाँ जापानको बारेमा तथ्यहरू जुन तपाईंलाई सायद कहिल्यै थाहा थिएन।
जापान बारे ५ रोचक तथ्य
1. विश्वको सबैभन्दा पुरानो कम्पनी जापानमा छ
कङ्गो गुमी संसारको सबैभन्दा पुरानो सञ्चालन व्यवसाय हो, ५७८ मा स्थापित। यो मन्दिर र तीर्थहरूको निर्माण मा विशेषज्ञता छ।
2. यो संसारमा ११औं सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या छ
अनुमानित १२६ मिलियन मानिसहरू जापानमा बस्छन् । २०११ देखि, जापानको जनसंख्या धेरै जसो कम जन्मदरको कारणले उल्लेखनीय रूपमा घट्दै गइरहेको छ- कतिपयले यो महँगो बाल हेरचाह र राम्रो तलब हुने जागिरहरू फेला पार्न कठिनाईको कारणले भएको बताएका छन्।
3. जापानीहरू (लगभग) सबैभन्दा लामो बाँच्छन्
हङकङपछि दोस्रो स्थानमा रहेको जापानमा जीवन प्रत्याशा ८४ छ, जुन युनाइटेड किंगडमको तुलनामा ३ वर्ष बढी हो ।
4. प्रत्येक २४ व्यक्तिको लागि १ भेन्डिङ मेसिन छ
५  मिलियन भेन्डिङ मेसिनको साथ- जापानमा विश्वमा सबैभन्दा बढी घनत्व छ। ब्याट्रीहरू, रामेन, खातिर, छाताहरू। फूलहरू- तपाईंले यसलाई नाम दिनुहुन्छ र भेन्डिङ मेसिनहरूले यसलाई भण्डारण गर्छन्।
5. विश्वभरका झन्डै आधा जिपरहरू जापानमा बनाइन्छ
यदि तपाईंले आफ्नो जिपर जाँच गर्नुभयो भने, सम्भावना छ, यसले यसमा YKK भन्नेछ, जुन Yoshida Kogyo Kabushikikaisha को लागि खडा छ। १९३४ मा टोकियो मा स्थापित, यो अनुमानित छ कि यो निर्माता द्वारा प्रत्येक वर्ष ७ बिलियन जिपर उत्पादन गरिन्छ।
२ जापानको सांस्कृतिक तथ्य
1. कृपया आफ्नो जुत्ता हटाउनुहोस्
जापानी घरहरूको प्रवेशद्वारलाई गेन्कान सिग्नल भनिन्छ जहाँ तपाईंले यसको उठेको भुइँको मद्दतले जुत्ता फुकाल्नु पर्छ। तल्लो क्षेत्रले संकेत गर्दछ कि तपाईंले आफ्नो जुत्ता कहाँ हटाउनु पर्छ र उठेको माथिल्लो क्षेत्र, प्राय: फरक प्रकारको फर्शमा, भित्री बस्ने ठाउँ मानिन्छ।
2. पहिलो गेशा पुरुषहरू थिए
ताइकोमोची भनेर चिनिन्छ र कहिलेकाहीँ हौकान-मेल गेइशाहरू भनेर चिनिन्छन्। तिनीहरूको महिमाका दिनहरू पूरा भएको २५ वर्ष नपुग्दा पनि महिलाहरू- जसलाई गीको- "आर्ट्स चाइल्ड" भनेर चिनिन्थ्यो, काम गर्ने ताइकोमोचीको सङ्ख्याभन्दा बढी भयो। गेइको त्यसपछि गेशा "कलाको व्यक्ति" मा परिणत भयो जसलाई हामी आज जान्दछौं।
जापान बारे2परिदृश्य तथ्य
1. जापानको 80% भन्दा बढी भूभाग पहाडी छ
यो पहाडी इलाकामा १०० भन्दा बढी सक्रिय ज्वालामुखीहरू समावेश छन् जुन संसारका सबै सक्रिय ज्वालामुखीहरूको लगभग १० बनाइएको छ- परिदृश्य उत्कृष्ट स्कीइङ र घुमफिरको लागि बनाउँछ। माउन्ट फुजी पदयात्राको लागि, के हाउस होस्टलहरू अति अनुकूल छन् जबकि फुजी लेक होटल एक स्टाइलिश लेकसाइड आवास हो जुन १९३० को दशकको हो।
2. जापानमा हरेक वर्ष लगभग १५०० भूकम्प आउँछन्
भूकम्पको आवृत्ति तीनवटा टेक्टोनिक प्लेटहरूमा रहेको देशको स्थानको कारणले गर्दा "प्यासिफिक रिङ अफ फायर" भनिन्छ।
PrevPreviousनिर्वाचनका लागि ४६ जिल्लाको मतपत्र छपाई सकियो
Nextस्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग तयार – दिनेशकुमार थपलियाNext